Khatarta Midib-baddalidda: Halista ay dumarka u badheedhayaan markay is caddaynayaan - Jigjiga Online
HomeArimaha BulshadaKhatarta Midib-baddalidda: Halista ay dumarka u badheedhayaan markay is caddaynayaan
“Markaan is eegay maalinkii arooskeyda, foolxumo weyn ayaan isku arkay, waa markaan ugu foolxumaa abid,” ayay tiri Shiroma, oo codkeeda ay murugo ka muuqato.
Waxay ku nooshahay meel u dhaw caasimadda Sri Lanka ee Colombo. sida ay sameeyaan inta badan dumarka ku nool koonfurta qaaradda Asia, waxay go’aansatay inay is caddeyso ka hor maalinta arooskeeda. Waxay rajeynaysay inay hesho midib dabacsan oo ifaya.
”Labo bilood ka hor maalinta arooskeyga, ayaan tegay goob la isku qurxiyo, waxay i soo siiyeen Kareem la isku caddeeyo, hal toddobaad un kaddib markii aan isticmaalay, maqaarkeyga dubkii ayaa ka kacay,” sidaas ayay u sheegtay Laanta afka Sinhala ee BBC.
“Waxaan rabay inaan yeesho midib cad, balse waan gubtay baddalkeedii,” ayay tiri.
Halka ay markii dambe ka fakari lahayd martida arooskeeda imaanaysa, iyo alaab gadasho, gabadhan oo 31 sano jir ah, waxaa waqtigeeda iyo lacagteedaba ka qaaday inay is daweyso.
“Makii hore waxaa igu billawday finan cad-cad oo markii dambe madow isku baddelay.”
Kareemka aan adeegsaday ma ahayan mid si sharci ah dalka ku soo galay, oo waxaa lagu iibiyaa oo keliya suuqa madow.
Finin madow ayaa weli ka muuqda qoorta Sharon, xitaa kaddib sanad oo ay is daweynaysay. Dowladda Sri Lanka ayaa haatan sheegtay inay tallaabo ka qaadi doonto Kareemada aan sharciga ahayn ee dalkaas laga isticmaalo.
Dhibkani kuma eka oo keliya ah Sri Lanka, waxaa uu saameeyay malaayiin dumar ah oo qaaradaha Asia iyo Afrika ku nool.
Suuqa is caddeynta ayaa sannadkii 2017-kii lagu qiyaasay $4.8 bilyan, waxaana la filayaa inuu gaaro $8.9 bilyan sannadka 2027-ka.
Hay’adda Caafimaadka ee Adduunka WHO ayaa sheegtay in afar ka mid ah 10-kii gabdhood oo Afrika ku nool ay is caddeeyaan.
Nigeria ayaa ugu badan, oo boqolkiiba 77 dumarka way is caddeeyaan. Waxaa ku xiga Togo, boqolkiiba 59, iyo dalka Koonfur Afrika, oo ah boqolkiiba 35.
Qaaradda Asia, dumarka Hindiya ayaa boqolkiiba 61 is caddeeya, halka Shiinaha ay tiradaasi gaarayso boqolkiiba 40.
Inta badan dumarka ayaa adeegsada waxyaabaha la isku caddeeyo iyagoon la tashanin wax takhtar ah, taasna waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin halis ah, waxaana ka mid ah:
(Xigasho – Hay’adda Caafimaadka Britain ee loo yaqaanno NHS)
Kareemada la isku caddeeyo qaarkood ee dhaqso lagu caddaado waxaa lagu daray maaddooyin aad halis u ah.
“Kareemada la isku caddeeyo ee leh maaddada Mercury waxay halis weyn ku yihiin caafimaadka aadanaha,” sida laga soo xigtay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Balse waxaa la ogaaday in dalal badan oo ay ka mid yihiin; Shiinaha, Lubnaan, Mexico, Pakistaan, Philippines, Maraykanka iyo Thailand.
Maaddooyinka halista ah sida Mercury ayaa jirka aadanaha ka joojiyo inuu soo saaro maaddada melanin oo dhaliso midibka jirka.
Dhibaatooyinka kale ee ka dhasho maaddooyinkaas waxaa ka mid ah:
Jirka oo iska caabin waayo caabuqa
Walwal iyo murugo xad-dhaaf ah